Fantaro i Kiado Cruz, hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny 22-28 Avrily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2019 8:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Esperanto , Español
Sary natolotr'i Kiado Cruz
Mandritra izao taona 2019 izao izahay manasa olona maro hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny niainan-dry zareo tamin'ny famelomana indray sy tamin'ny fampiroboroboana ny fitenin-drazan-dry zareo. Miresaka momba an'i Kiado Cruz (@Kiadorindani) ity lahatsoratra ity sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Kiado Cruz no anarako, avy amin'ny vondrom-piarahamonin'i Santa Cruz Yagavila, any amin'i Sierra de Juárez de Oaxaca aho. Avy any ny fototra misy ahy sy ny raibeko sy ny renibeko. Any aho no miaina. Any no iroboroboan'ny fianakaviako, eo akaikin'ny milpa izahay no mamboly sy miompy. Tao anatin'ny folo taona aho nifantoka tamin'ny fananganana ny tenin-drazako, Zapotec, hanana ny akony ao amin'ny fampitam-baovao nomerika, naka anjara toerana tao amin'ny fiteny haino aman-jery; amin'ny teny hafa, manangana fiteny amin'ny fahavitrihana nomerika mba hidemaokratizena ny aterineto.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay nisy ny fisongàna tamin'ny fampiasana ny fitenin-janatany ao amin'ny tontolon-tsibera, hita amin'ny tambajotra sosialy na sehatra famangitana ny Free Software (tovozina malalaka) ny fiteny maro ka anisan'izany ny Zapotec. Na izany aza, mihahaingana ihany koa ny fahaverezan'ny tenin-janatany ary tombanana fa hanjavona ny atsasany mahery amin'ny fimaroam-piteny, amin'ny taompolo manaraka, raha tsy misy ny fandrafetana politika na programa mikendry ny hamelona indray na hanamafisam-boho ny teny. Ny fanampiana ny fiteny handray anjara ao amin'ny fampitam-baovao fiteny tokana na ao amin'ny fiteny roa an-kolontsaina tokan'ny aterineto, ary ny fanomezan-toerana ny fiteny Didza Xhidza (Zapotec) ao amin'ny media nomerika amiko dia fijoroana (toerana) ara-politika. Fijoroana izany hoe karazam-bahoaka miteny amin'ny fiteny hafa ao amin'ny tontolon'ny feo maro manako ao anatin'ity tontolo mandeha haingana dia haingana tsy misy itodiana sy dystopiana ity.
Te-hifantoka amin'ny lohahevitra manokana tsy manadino ny karazany aho, ho fanombohana tsara ny manoratra ireo fomba fiteny xhidza (Zapotec): poezia, hira, dihy, ary sakafo amin'ny Zapotec/Espaniola, hanolotra fampieritreretana lalina amin'ny toe-draharaha ankehitriny sy mba isian'ny resaka ahenoana ny feon'ireo vahoaka eto amin'izao tontolo izao ao amin'io sehatra nomerika io. Ao anatin'izao fanambaràna ny taona iraisampirenena ho an'ny fiteny indizeny izao, tiako ny hanasongadina ny fanamafisana ny politika mivaingana manery ny Fanjakana samihafa hijery ireo ezaka madinika amin'ny fahavitrihana nomerika ireo, ireo hetsika mandray anjara amin'ny famelomana imaso indray ny fiteny ao amin'ny Fanjakana Oaxaca sy any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao.
RV: Inona no tena nandrisika anao havitrika ara-nomerika ho an'ny fiteninareo? Inona avy ny fanantenanao sy ny nofinofinao ho amin'ny fiteninareo?
Nofinofiko ny fiteniko, mety ho fiteny maro, ho akanin'ny fiteny. Ny tena nampaharisika ahy indrindra dia ny nahafahana mampiasa ny haino aman-jery (radio sy TV) hilaza ny voambolako, ny voambolana Zapotec #DidzaXhidza. Mihevitra aho fa fomba matanjaka iray amin'ny famoloma-maso indray ny fitenin-janatany ny haino aman-jery, mihoatra ny fandraketana ara-piteny. Mavitrika aho amin'ny famangitana, fanatsatohana, ary ny fampiasana ny rindrambaiko maimaimpoana toy ny Firefox handika azy ho amin'ny fiteny Zapotec, amin'ny fampidirana kaody roa fototra amin'ny mety ho fakàn'ny vahoaka indizeny ho ampiasainy ny teknolojiam-baovao sy fifandraisana. Tonga tao amin'ny tambajotra sosialy aho tamin'ny famoahana sary-sy-soratra, sarim-panazavana ary fitaovana hafa mba hisian'ny fiteny xhidza ao amin'ny media nomerika, mba hanombohana manoratra amin'ny fiteny Zapotec ary ahafahan'ny mpisera aterineto avy amin'ireo tanànakely zapotec xhidza milaza ny fiteniny, sy hiteraka fifampiresahana ara-kolontsaina ao amin'ny tambajotra sosialy.